अकस्मात यो के भयो, एक महिला धर्ति माताको खुट्टा समातेर भक्कानिए पछि माताले के गरिन् यस्तो !! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /अन्तरास्ट्रिय/अकस्मात यो के भयो, एक महिला धर्ति माताको खुट्टा समातेर भक्कानिए पछि माताले के गरिन् यस्तो !!
अकस्मात यो के भयो, एक महिला धर्ति माताको खुट्टा समातेर भक्कानिए पछि माताले के गरिन् यस्तो !! (भिडियो हेर्नुहोस्)अकस्मात यो के भयो, एक महिला धर्ति माताको खुट्टा समातेर भक्कानिए पछि माताले के गरिन् यस्तो !! (भिडियो हेर्नुहोस्)अकस्मात यो के भयो, एक महिला धर्ति माताको खुट्टा समातेर भक्कानिए पछि माताले के गरिन् यस्तो !!
अहिले विश्वभरीका हिन्दुहरुको ध्यान नेपालको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. ४ तर्फ छ । यहाँ विश्वभरीकै हिन्दुहरुले विशेष मान्ने माता महाकालीको जीवित अवशेष फेला परेको दावी गरिएको छ । महाकालीको पैताला यहाँ भेटिएको र उत्खनन गर्दा साक्षत मुर्तीपनि फेला परेको दावी गरिएको छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने माता महाकाली जीवित आत्मामा प्रवेश गरेर सिन्धु कालीको रुपमा माता महाकाली उक्त स्थानमा रहेको वाणी आएको थियो ।
यस्ता लक्षण देखिए रहनुहोस् सावधान ! हुनसक्छ एपेन्डिसाइटिस